Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mmụta National Geographic: Banking na Egypt
National Geographic Learning, otu Cengage Group, kwupụtara taa na ha abanyela mmekọrịta ogologo oge na Ministry of Education nke Egypt, na-enye usoro ọmụmụ 4-6 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ụmụ akwụkwọ asaa na Egypt.
Mmekọrịta nke National Geographic, nke ga-ewepụta akwụkwọ na akwụkwọ klaasị dijitalụ, bụ akụkụ nke ọhụụ nke Minista Mmụta Dr. Tarek Shawki's Education 2.0 ọhụụ-mgbanwe zuru oke nke usoro agụmakwụkwọ Egypt ka ọ na-erule 2030-dabere na itinye uche na nka ndụ, imepụta ihe, dị oke egwu. iche echiche na nganga ndị Ijipt. Na karịa Nde ụmụ akwụkwọ ndebanye aha 20na K-12, Egypt nwere usoro agụmakwụkwọ kachasị na Middle East na Africa. Agbanyeghị, agụmakwụkwọ n'Ijipt ekwekọghị n'ịkwadebe ụmụ akwụkwọ na 21st nka idozi nsogbu narị afọ dị mkpa iji wuo ọrụ bara uru.
“Anyị chọrọ ka ụmụ akwụkwọ mụta ihe maka ndụ, ọ bụghị maka ule,” ka Dr. Tarek Shawki, Minista Mmụta na Mmụta Nka na ụzụ Egypt kwuru. “Anyị chọrọ onye mmekọ ga -enyere anyị aka kwadebe ụmụ akwụkwọ nka maka ọrụ ọdịnihu na ihe ịga nke ọma na ndụ, malite na nwata. Anyị họọrọ National Geographic Learning n'ihi na ọdịnaya, imewe, na nkuzi na -ewetara ụmụ akwụkwọ mmụta ndụ n'ezie. ”
Iji kwado mgbanwe mmụta nke Egypt, National Geographic Learning na -ewepụta usoro ọmụmụ maka Bekee, Social Studies, Nka Ọrụ na Ozi na Teknụzụ Nkwukọrịta (ICT). Nka ọrụ na ICT dị oke mkpa na ọhụụ agụmakwụkwọ 2.0 na Egypt, ebe ha na-ewebata ndị dị afọ 10-12 n'ọtụtụ ọrụ ha nwere ike ha amachaghị, yana nka ha ga-achọ maka ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu na ngalaba ndị ahụ. .
Alexander Broich, Onye isi oche nke Cengage Global Businesses na Onye isi njikwa maka Asụsụ Bekee kwuru, "Ministry of Education nke Egypt ewerela ụzọ dị oke mkpa n'ịmepụta usoro ọmụmụ siri ike, na-agba mbọ hụ na ọgbọ na-azụlite ihe ọmụma, ikike ndụ na ụkpụrụ maka ihe ịga nke ọma n'ọdịnihu." Ịkụzi ihe. “Na Cengage Group, anyị kwenyesiri ike na ọ dị mkpa ịkwadebe ụmụ akwụkwọ maka ndụ na ọrụ. Ebumnuche anyị bụ ịgba mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ abụghị naanị ogo dị njikere, kama ọrụ dị njikere. Ministrị Mmụta nke Egypt kwadosiri ike na ozi a, anyị nwere mpako inye aka weta mmụta na ndụ, n'ije ozi mgbanwe mgbanwe mmụta 2.0 nke Dr. Shawki. "
Na mgbakwunye na ịnye usoro ọmụmụ Bekee dị ka akụkụ nke mmekorita, a ga -enye ọdịnaya ICT n'asụsụ Bekee na Arabic iji nyere aka n'ịmụta asụsụ bekee dị ka akụkụ nke agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ praịmarị ha.
Broich gara n'ihu kwuo, "Ọka nka n'asụsụ Bekee na -arụkwa ọrụ dị mkpa n'inyere aka kwadebe ndị na -amụ ihe n'ofe ụwa niile maka ahịa ọrụ." "Anyị kwenyere na ọkara nke ụwa ga -asụ ma ọ bụ mụta Bekee ka ọ na -erule 2030 n'ihi na onye maara Bekee nke ọma bụ ọnụ ụzọ ọrụ na -ekwe nkwa maka ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa."
Usoro ọmụmụ ahụ nwere ndị Ijipt na -akpali akpali na ndị na -enyocha National Geographic iji nyere aka tinye aka, kpalie ma tinye mpako na ndị mmụta Egypt.
Fred Hiebert, Archaeologist na Residence for National Geographic Society kwuru na "National Geographic nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke na -enwu ma na -echebe ihe ịtụnanya ụwa anyị, yana onye otu National Advisory Council Council Advisory Council for Egypt Ministry. “Akụkọ banyere mmetụta akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị mmadụ nwere na mbara ala anyị bụ akụkụ nke ihe nketa pụrụ iche nke National Geographic. Ọ nweghị ihe atụ ka mma karịa nke National Geographic kpuchiri Egypt, otu n'ime ọdịbendị na -aga n'ihu kacha mara amara. ”
Hiebert gara n'ihu na -ekwu, "Mmekọrịta a bụ ohere dị egwu maka National Geographic iji bulie olu obodo na ndị ọkà mmụta sayensị na Egypt."
Ụlọ akwụkwọ praịmarị niile dị n'ofe Egypt bidoro iji usoro mmụta mmụta mmụta mmụta ala Geographic na Ọktọba 9, malite na klas nke anọ maka afọ agụmakwụkwọ dị ugbu a, wee gbasaa ruo ọkwa nke ise na nke isii n'ime afọ abụọ na -esote.
Banyere National Geographic Learning
National Geographic Learning, otu Cengage Group, bụ onye ndu izizi akwụkwọ maka nkuzi asụsụ Bekee na ahịa agụmakwụkwọ sekọndrị n'ụwa niile. Na National Geographic Learning, anyị kwenyere na onye na -amụ ihe na -etinye aka na onye nwere mkpali ga -abụ onye na -eme nke ọma, anyị na -ejikwa usoro ịkọ akụkọ na -emekọrịta ihe nke ukwuu nke bụ ụzọ dị mma ịkpọ oku njikọ ndị a. Iji mụtakwuo, gaa na: eltngl.com.
Banyere Cengage Group
Otu Cengage, ụlọ ọrụ teknụzụ agụmakwụkwọ zuru ụwa ọnụ na -eje ozi ọtụtụ nde ndị na -amụ ihe, na -enye ngwaahịa na ọrụ dijitalụ dị ọnụ ala, dị mma nke na -akwadebe ụmụ akwụkwọ nka na ike dị mkpa iji dị njikere ọrụ. Ihe karịrị afọ 100, anyị emeela ka ike na ọ joyụ nke mmụta nwee ọdịnaya tụkwasịrị obi, na -etinye aka, yana ugbu a, igwe okwu dijitalụ agbakwunyere.